‘नेपालको अविकास भारत र चीनका निम्ति लज्जा हो’ - BBC News नेपाली
‘नेपालको अविकास भारत र चीनका निम्ति लज्जा हो’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई नेपाली पक्षले ऐतिहासिक महत्वको भनेर व्याख्या गरेको छ। भ्रमणका बेला भएको पारवहन सम्झौताले दुरगामी महत्व राख्ने बताइंदै छ। तर इन्धन खरीद सम्झौता तत्काल हुन नसक्नुले धेरै नेपालीलाई खिन्न बनाएको छ। चिनियां पक्षले चाहीं भ्रमणलाई कसरी हेरेको छ त? बेइजिंगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनसम्बन्धी चिनियां संस्था चाइना इन्स्टीच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेशन (CICIR) मा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने विज्ञ हु सिसेंग नेपाली मामिलाका जानकार मानिन्छन्। उनीसंग बीबीसी नेपाली सेवाका महेश आचार्यले बेइजिंगमा गरेको कुराकानीका अंश:
तर यो त नेपाल र चीनबीचको मात्रै मामिला हो नि, होइन र?
मेरो भन्नुको तात्पर्य क्षेत्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय एकताका लागि प्रमुख शक्तिले थप योगदान दिनु आवश्यक छ - राजनीतिक, नीतिगत छलफल वा कुनै निश्चित आर्थिक परामर्श गरेर। चीन र भारत यो क्षेत्रमा पर्छन्। उनीहरुले एकअर्काको संवदेनशीलता विचार गर्दा उपयुक्त हुन्छ - खासगरी साझा छिमेकी मुलुकहरुमा।
तर इन्धनको सवालमा चिनियां पक्षले त्यति तत्परता नदेखाउंदा यसैपालि सम्झौता हुन नसकेको टिप्पणी पनि सुनिएका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाई?
तर भारतले यो त्रिदेशीय साझेदारीको विषय त्यति रुचाएको जस्तो देखिदैंन त?
अपशब्द बोल्दा कस्तो अनुभव हुन्छ?